Mandritsara : Voasambotra ilay mpisoloky milaza ho mahatafiditra ho zandary – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 7:17
FIARA MPANARAKA NY FILOHA NIHARAN-DOZA: 10 no naratra, tsy nisy ny aina nafoy
FARITRA ANALAMANGA: Notokanan’ny Filoha ny toerana fialam-boly sy fitsangatsanganana “Analamanga Park”
FIFIDIANANA BIRAON’NY HOLAFITRA: Kihon-dalana ho an’ny asa fanaovan-gazety anio
TETIKASA « BRANCHEMENT MORA »: Tokantrano marefo miisa 30 000 hisitraka herinaratra hatramin’ny 2023
ANALAMANGA PARK : Hotokanana rahampitso, amin’ny endriny vaovao
FITSABOANA VOALOHANY “URGENCE”: Hatao maimaimpoana avokoa eny amin’ireo hopitalim-panjakana
FIARAHAMIASA TAMIN’NY AIR AUSTRAL : Tafakatra 72 tapitrisa dolara mahery ny trosan’ny Air Madagascar
TALE JENERALIN’NY FANDRAHARAHANA NY FONJA : « Tsy andraikitry ny mpitsabo no miandry ny voafonja »
Antananarivo, MGA 4	℃
Mpampianatra amina sekoly tsy miankina any an-toerana ilay mpisoloky.
Accueil/Songadim-baovao/Mandritsara : Voasambotra ilay mpisoloky milaza ho mahatafiditra ho zandary
Mandritsara : Voasambotra ilay mpisoloky milaza ho mahatafiditra ho zandary
Tra-tehaky ny zandary tao amin’ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Mandritsara, ny lehilahy iray mpisoloky milaza ho mahatafiditra ho zandary. Taorian’ny fitarainan’ny lasibatra ny alatsinainy lasa teo, dia sarona izy. Volabe hatramin’ny 6.600.000r no efa azony tamin’ny fisolokiana nataony…
Rado Harivelo 12 août 2021
Raim-pianakaviana iray no tonga nampandre tao amin’ny vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena Mandritsara, ny alatsinainy lasa teo, fa voasoloky vola 6.600.000 Ar nandritra ny fifaninanana hidirana ho Zandary farany teo. Araky ny fanazavany dia nisy zanany isany mpifaninana tamin’ny fidirana ho zandary farany teo. Nisy lehilahy iray anefa nilaza tamin’izy ireo fa mahafantatra Kolonely miasa any Antananarivo miaraka amin’ny kaomandin’ny borigady, izay miasa ao Mandritsara, izay samy voalaza fa mahavita mampiditra ho Zandary. Araka izany, dia nangalan’ity mpisoloky ity volabe ity mpifaninana ho Zandary izay te ho afaka. Voalaza tamin’izany fa nalainy inefatra miantoana io vola io. Tamin’ny voalohany, 4.000.000 Ar no nalainy ka nofitahiny fa homena ny kaomandin’ny borigady, mba halefa any amin’ilay kolonely voalaza. Ny faharoa, mila 1.000.000 ariary izany ny CB, amin’ny fandraisana ny taratasy mahakasika ity mpiadina. Ny fahatelo, mila 1.000.000 Ar koa izy, fa nandalo teto Mandritsara ity kolonely, ka tokony hokarakaraina tsara. Ary ny farany, mila 600.000 Ar izany izy hikarakarana ireo mpampiadina tany amin’ny toerana nisy ny fanadinana tany Antsohihy. Rehefa nivoaka anefa ny valim-panadinana, dia tsy afaka ilay mpiadina ary ilay mpisoloky kosa, tsy azo antso an-telefaonina intsony sady tsy hita teto Mandritsara taorian’io fotoana io ka izany no antony nitorian’izy ireo azy.
Vokatry ny fikarohana izay natao, voasambotra omaly, tao Mandritsara renivohitra ilay mpisoloky, izay mpampianatra amina sekoly tsy miankina iray ao Mandritsara. Taorian’ny fisamborana azy, niaiky ny heloka vitany ity farany ary nanambara fa izy ihany no tompon’ireo laharana finday, izay voalaza fa an’ilay Kolonely sy ny Kaomandin’ny borigady. Nomarihiny fa tsy mahafantatra CB izy ary tsy manana olona kolonely akory. Araka ny fanazavan’ny voasandoka, mifanao fotoana matetika ao an-dakazera izy sy ity mpisoloky nandritra ny fanefana inefatra nisesy ny lelavola notakiana. Anisan’ny tena naharesy lahatra azy hoe mahalala tomponandraikitra Zandary marina ity olona natokisana hampiditra ny zanany. Sarotra moa ny namantatra azy ireo, nandritra izany fotoana rehetra izany, noho izy ireo nifanosina tamin’ny olona manan-draharaha tao amin’ny Tobim-paritra Mandritsara. Misokatra ny fanadihadiana momba ity raharaha fisolokiana ity.
TETIKASAM-PAMPANDROSOANA : Nankatoavin’ny mpamatsy vola ny fanamboarana ny RN6
VAOVAON’NY COVID-19 : Matoky ny haino aman-jerim-panjakana ny vahoaka
ANTENIMIERANDOHOLONA: Mangoron-damba Rakotovao Rivo sy ny ekipany
NA TEO AZA NY COVID-19… : Nihazakazaka ny asa fampandrosoana, ny fanatsarana ny fitantanana sy ny sosialim-bahoaka
LOHOLONA 12 NOFIDIANA SY 6 NOTENDRENA: Hivory voalohany anio ireo Loholona 18